ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၉ ) | MoeMaKa Burmese News & Media
ပင်လုံဇာတ်ကြောင်းပြန်ကြောင်းလေ့လာသော် - အပိုင်း (၃)
Les Chiffres ဂဏန်း ရေတွက်ပုံများ ( လေရှိဖ်ရ် ) နှင့် Prépositions (ပရေပိုဇီးစီးယွန်း ) ဝိဘတ်များ
Bonne Année( ဘွန်း နန်း နေး )ကောင်းသော နှစ်သစ်ပါ
ဥပမာ – ၇၀ ကိုရေတွက်ရန် ၆၀ နှင့် ၁၀ ဟူ၍၄င်း ၊ ၇၁ ကို ရေတွက်ရာမှာ ၇၀ နှင့် ၁ ဟု မရေတွက်ပဲ ၆၀ နှင့် ၁၁ ဟု ရေတွက်ပါသည်။ ( ၆၀ + ၁၀ ) ( ၆၀ + ၁၁ )
အထက်ပါအတိုင်း ၉၀ မှ ၉၉ အထိ ရေတွက်ရာတွင်လည်း ၈၀ ကို အခြေခံပြီး ထပ်ပေါင်း ထည့် ပေးခြင်း သာဖြစ်သည် ။ ဥပမာ – ၉၁ ကိုရေတွက်ရာတွင် ၈၀ + ၁၁ ဟူ၍၄င်း ၊ ၉၉ ကို ၈၀+ ၁၉ ( ၈၀ နှင့် ၁၉ ဟု ဆိုသော်လည်း ကြားတွင် ဘာကိုမှ ထည့်သွင်း ရွတ်ဆိုခြင်း မပြုရပါ ။
ဥပမာ – ၃၁ ကို ၃၀ နှင့် ၁ ၊ ၄၅ ကို ၄၀ နှင့် ၅ စသဖြင့် ပုံမှန် အတိုင်းရေတွက်ပါသည် ။
၁၀ ၊ ၂၀ ၊ ၃၀ ၊ ၄၀ ၊ ၅၀ …. ၉၀ အထိ သည်လည်း သီးခြား အခေါ်အဝေါ်ဖြင့် ပုံမှန် ခေါ်ပါသည် ။
Prépositions (ပရေပိုဇီးစီးယွန်း ) ဝိဘတ်များ
à l’extérieur de ( outside ) အာလိတ်စတေးရီးယားဒယ်၊ အပြင်မှာ
à l’intérieur de ( inside ) အာလန်တေးရီးယားဒယ်၊ အတွင်းမှာ
ဥပမာ…. ကားသည် အိမ်ရှေ့တွင် ရှိသည် ၊ ဟုပြောကြည့်ရအောင်၊
စာကြောင်းကို တဖြည်းဖြည်း ချဲ့ထွင် ရေးသားနိုင်သည်ကို ကြည့်ပါ။ သွားသည် ဆိုသော ကြိယာ၏ မူရင်း စာလုံး verbe infinitif သည် Aller ဖြစ်သော်လည်း verbe conjugaison လုပ်လိုက်သောအခါ မူရင်း ကြိယာမှလုံးဝ ကွဲပြားသွားသော စာလုံးများ ဖြစ် လာပါသည်။ Aller သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြိယာ များထဲမှ အသုံးများသောတခုဖြစ်သည်။
Je vais à l’école. ရဗေးအာ လေးကောလ် (Je vais ကျနော်သွားသည် လို့မှတ်ပါရန်)
Je vais à l’école avec Hla Hla. ရဗေးအာ လေးကောလ် အာဗက် လှလှ
Je vais à l’école à pied. ရဗေးအာ လေးကောလ် အာပြေး
Je vais à l’école en voiture. ရဗေးအာ လေးကောလ် အွန်ဗွားကျူး
လင့်၏ ဒုတိယပိုင်း ဖြစ်သော လေ့ကျင့်ခန်းများသည် VERBE ” ETRE “ ကိုအသုံးပြု၍ ဖြစ်ခြင်းကိုပြသော စာကြောင်း များ ဖြင့်တည်ဆောက်ပေးထားသောကြောင့် တလက်စတည်း မိမိ ပြောလိုသော ပစ္စည်းများအကြောင်းကို ၄င်း လင့်မှ နမူနာယူ၍ တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ ကွက်လပ်များကိုဖြည့်ရင်း လေ့ကျင့်ပါ။
S’il vous plaît.စီးလ် ဗူး ပလဲ ၊ “တဆိတ်လောက်ကျေးဇူးပြု၍ ” ဆိုတာကို “ဆီဗူးပလင်း”
ça va. စာ ဗား ၊ “အိုကေရဲ့လား” ဆိုတာကို “စားဖား”
A bientôt. အာဗျန်တိုး ၊ “မကြာခင်ပြန်ဆုံမယ်” ဆိုတာကို “အာဖျံကွီး” စသဖြင့်နောက်ရင်းပြောင်ရင်း အလွယ်မှတ်ရတာတွေလေ ။
A bientôt. အာဗျန်တိုး ၊ “မကြာခင်ပြန်ဆုံမယ်”